Inferum | Inferum In Somali
Aaladani waxay caadi ka dhigtaa xaaladda dhiiga mara halbowlayaasha.
Waxa loo qaabeeyey ama ay u sameysantahay in iyadoo aan daawo la qaadan caadi ka dhigto dhiiga halbowlayaasha maraya ee gaaraya jirka dhamaantiis, iyo in ay dejiso qofka iyo jirkaba.
Waxaa la isticmaali karaa kaligeed ama iyadoo lala qaadanayo daawooyin kale labadaba.
 Waxay saxdaa kicitaanka dhiiga ama dhicistiisa
 Waxay keeni kartaa in laga kaaftooma qaadashada kiniinka ama la yareeyo.
 Waxay nolosha qofka ka dhigaa mid raaxo leh sida : iyadoo dajisa qofka ama u soo celiya dareen caafimaad qab ah.
 Waxay qofka caawisa xili kasta iyo cimilo kasta ood joogto , waxay dheelitirtaa ama miisaantaa saameynta ama isbedelka cimiladu ku yeelato jirka
 Elektroonada ama Maayada ay Aaladaani ku dheelitirayso deganaanta dhiiga waxay wax tartaa xajmiga xididada dhiiga qaada, waxayna caawisaa nidaamka dareen qaadayaasha jirka guud ahaan, waxayna abuurtaa dareen dagaansho ah.
Nidaamka maayada (electrostimulative electrodes) ee ku dhex dhisan Aaladaani waxaa loo qaabeeyeyin ay la falgalaan si caadi ah shaqada xididada iyo waxaha kale ee gacanta.
Qaabka falgalka Aaladaani waa sidan soo socota:
Falgalka elektronada Aaladaani jirka u dirayo waa kuwo sahlan oon wax u dhimeyn jirka marka ay la falgalayaan . Aaladaan waxuu leeyahay prograamo kala duwan oo maayadeed kuna kala socda frekuwensooyin kala duwan (ka bilowda 9-77 Hz)kuna xiran isbedelka wakhtiga iyo amplitude-ka
Doorashada program gaar ah waxay keeneysa hoos u dhac ama waxa la yiraahdo sympathicotonia kaas oo keena hypertension ( dhiiga oo kaca) ama cagsigeeda kordhiya presharka dhacsanaa oo sameeya waxa la yiraahdo sympathetic nervous system ee habowlayaasha kaas oo keena waxa la yiraahdo hypotension (dhiiga oo hoos dhaca).
Falgaladaas waxaa ka soo baxa sidan:
– Bareshaarka dhiiga halboowlayaasha oo dheelitirma (Normalises)
– Xaalada Guud ee jirkoo dhan oo hagaaga
– Hab-dareenka qofka oo fiicnaada
– Qofka oo noqda mid shaqeysta ama howl maalmeedku u fududaado.
– Dawada uu qaato oo uu yareeyo
HYPERTONIA – MC6 (Kacsanaan dareen iyo nervoos)
MC6- meesha ama soonaha laga yareeyo dhiiga kacsanaantiisa waxay ku taalaa dhica hoose ee gacanta bidix ama dhudhunka .
Soonayaashaas oo la dheelitiro iyadoo la isticmaalayo Aaladaan waxay dejisaa ama miisaantaa sistemka dareenka iyo dhiiga qofka. Aaladaan waxaa loo isticmaalaa dejinta dhowr xanuun oo kal duwan sida xanuunada wadnaha iyo xididada dhiiga (cardiovascular, arterial hypertonia, vegetative-vascular dystoia) iyo sidoo kale, dhiig oo kaca hadana dhaca oon deganeyn, xanuunada hurdaxumida iyo xanaaqa badan.
Halka mar oo la isticmaalayo qalabka, wakhtigu ay kugu xirnaaneyso waa 5 (shan) daqiiqo.
Qaabka isticmaalka waa :- Iska bixi waxyaabaha gacanta lagu xirto sida saacadda, jinjimaha gacanta bidix, laab shaarka ama wixii kale oo daboolaya gacanta. Ku xir qalabka ka dibna taabo botanka yareynta dhiiga kacsan. Marka aad dhameysato 5 daqiiqo iska fur, waa muhim in aad fariisato ama is kala bixiso meel degan si aad nasasho u hesho mudo dhan 20 daqiiqo.
Waxaa fiican in aad isticmaasho 1-3 jeer maalintii qalabka mudo dhan 14 maalmood.
HYPOTONIA –TE5 ( Dareen habacsanan iyo tabar dari)
TE5- meesha ama soonaha laga kordhiyo shaqada iyo awooda dhiiga waxaa ugu haboon dhinaca kore ee gacanta bidixda ah dhammadka dhudhunka.
Soonayaashaas oo la abaaro iyadoo la isticmaalayo Aaladaan waxay dejisaa ama miisaantaa sistemka dareenka iyo dhiiga qofka. Aaladaan waxaa loo isticmaalaa dejinta dhowr xanuun oo kal duwan sida xanuunada wadnaha iyo xididada dhiiga (cardiovascular, arterial hypertonia, vegetative-vascular dystoia) iyo sidoo kale, dhiig oo kaca hadana dhaca oon deganeyn, xanuunada hurdaxumida iyo xanaaqa badan.
Marka dhiigu dhacsanyahay, halka mar oo la isticmaalayo qalabka wakhtigu kugu xirnaaneyso waa 6 (lix) daqiiqo
Qaabka isticmaalka waa : Iska bixi waxyaabaha gacanta lagu xirto sida saacadda, jinjimaha gacanta bidix, laab shaarka ama wixii kale oo daboolaya. Ku xir qalabka ka dibna taabo botanka dheelitiraya dhiiga. Marka aad dhameysato iska fur, waa muhim in aad fariisato ama is kala bixiso meel degan si aad nasasho u hesho mudo dhan 20 daqiiqo.
Aaladaan inferum NBP-050 waxaa loo qaabeeyey iyadoo aan la qaadan wax dawo ah, in uu miisaamo dhiiga ama caadi ka dhigo sidoo kale in dejiyo qofka heer-dareenkiisa.
Goormaa la isticmaalaa:
-Marka qofku dhiigiisu kaco ama hoos u dhaco taas oo ka timid strees ama sameyn isbadalka cimiladu ay ku yeelato.
-Xanuunada halbowlayaasha-dhiiga sida (Arterial hypertonia) ama hypotonia kaas oo u baahan daweyn balaaran oo la isugu daro Aaladaan iyo dawooyin kale.
-Aaladan kaligeed aya la isticmaali karaa marka ay bilow yihiin xanuunada (Arterial hypertonia ama hypotonia) oo laga yaabo in aan loo baahan daaweyn. Ama marka qofka lagula taliyo in uu badelo qaab nololeedkiisa sida cuntada, jimicsiga, joojinta waxyaabaha jirkiisa wax u dhima iyo dhimidda miisaanka.
-Xanuunada vegetative-vascular dystoia kaas oo leh astaamaha hypertonic ama hypotonic
-Xanuunada endocrine renal pathology oo leh astaamaha guud ee arterial hypertonia ama hypotonia.
Yaan isticmaali Karin Aaladaan:
• -Qofka aan xamili Karin maayada elektroonka ah.
• -Qofka ay ku jirto birta wadnaha la galiyo (pacemaker)
• -Qofka qaba xanuunka kansarka jirka sida Neoplasms
• -Qofka leh Xumad aad u daran
• -Qofka waalan oo qaba xanuun maskaxeed ama khamri cabsan
• -Qofka qaba xanuunka wadnaha ee arrhythmia, oo ah wadnaha garaaciisa oo isbedel ku dhaco marna gaabis ah marna xowli ah oon deganeyn
• -Qofka qaba wadne-xanuunka loo yaqaan Myocardial infarction.
Aaladaan waxay ka kooban tahay (inferum NBP-050)
– Dhumucda Xariga gacanta lagu xiro ee Aaladaani waxuu dheerar ahaan gaaraa 68 ilaa 120 mm
– Meesha Iftiinka bidhaama leh Aaladaan waxay iftaa marka uu daaran yahy si loo isticmaalo taas oo biligleysa marka la isticmaalayo
– Marka baterigu dhamaado waxaa soo shidmaya ifka/nalka guduudan. Taas oo ku tuseysa in loo baahanyahay in aad badesho bateriga.- Aaladaan waxay qaadataa bateriga 2- LR03/AAA ama R03/AAA, labada bateri oo cusub oo ah 1500mA/hr waxay ku filan yihiin ama ku heyn karaan 100 jeer oo isticmaal ah
– Bateriyadu kuma jiraan baakadka Aaladaan ee gooni ayaad u gadaneysaa.
Waxyaabaha ku jira baakadka Aaladaanio waa :-
o Mishinkaa inferum NBP-050
o Galka uu ku jiro qalabku/mashiinku
o Buuga kuu faahfaahinaya isticmaalka Aaladaan.
• Qalabka loo isticmaalo
o ka Kooban cover qalab ee ay ka samaysan yihiin caag ABS, cover sare – caag ah oo nadiif ah.
o xadhigga waxaa laga sameeyey dhar jilicsan laastikada oo ay hubisaa in uu jiro xiriir u dhexeeya dhagan electrodes iyo maqaarka ee ka jabisay gacanta.
• Daryeelka qalab aad
o Isticmaal jeermiska dila aan dagaal badan si aad u nadiifiso electrodes ah (tus saabuun xal ama xal klorhexidinsprit daciif ah) iyo dharka jilicsan oo ha sii daayo macdantaa.
o Qalabka wuxuu ka kooban yahay qaybaha jilicsan. waxaa Ilaali ka dhex tuulnaa. All dayactirka qalabka waa in kaliya la sameeyo shaqaalaha u qalma ee warshad wax soo saarka.
o Si looga hortago dhaawac suurtagal ah in qalabka, waa in aad isticmaalin qalabka halka qalabka kale ee korontada ku shaqeeya waa in la isticmaalo.
• Kaydinta qalabka
o Heerkulka ka -40 ° C si + 50 ° C iyo huurka qaraabo ah oo ilaa 80% (at + 20 ° C). Haddii kaydiyo qalabka heerkulka ah daarmayaay’e hoos ku +10 ° C, waxaa ka tago heerkulka qolka baakadda xiran ugu yaraan 3 saacadood ka hor inta la isticmaalayo (si looga hortago formation uumiga).
• Qalliin qalabka
o Heerkulka ka +10 ° C inay +35 ° C iyo huurka qaraabo ka 30% in ay 93%, cadaadiska Hawada ka 70 KPA in 106 KPA.
o Ku shaqeeyaan qalabka fogaan ku filan oo laga helay ilo kulaylka iyo ka-gaadhista muddo-dheer ilaaliyo qorraxdu si at (ka badan +35 ° C) heerkulka hawada daarmayaay’e sare.
• Ilaalinta ka dhanka ah qoyaan
o qalab ma aha adag; ka qoyaan kordhay ilaaliyo. cover The qalab ee rating ilaalinta waa IP 41.
o Muddada damaanad isticmaalka qalabka waa 2 sano.
BASHI FARAH +254712768788
MUSA SHEIKH +254722624879
Copyrights © 2017 The inferum. Disclaimer | FAQ
Designed & Developed By: Mastech Technologies